Mashiinka qashin-qubka birta ee aan lahayn boodhka ah ee Holdwin
Guudmarka Faahfaahinta Faahfaahinta Degdegga ah Nooca Mashiinka: Xaaladda SandBlaster: Meel Cusub oo Asal ah: Zhejiang, Magaca Magaca Shiinaha: HOLDWIN Shidaalka: Shahaadada Korantada: ce, CSA Isticmaal: nadiifinta nadiifinta nadiifinta Nidaamka Nadiifinta: Nadiifinta Nadiifinta Uumiga: Nooca gacanta: Awoodda Birta / Gariiradda ( W): 750w Qiyaasta (L * W * H): 900 * 600 * 520mm Dammaanad: 1 Sano Adeeg Ka Dib-iibka La Bixiyay: Taageerada khadka tooska ah, xarunta adeegga dibedda ee laga heli karo Warshado Lagu Haboon: G ...
Holdwin Mini sandblast mashiinka la qaadan karo ee sandblasting golaha wasiirada miridhku ka saar sandblaster
Guudmarka Faahfaahinta Faahfaahinta Degdega ah Nooca Mashiinka: Xaaladda SandBlaster: Meel Cusub oo Asal ah: Zhejiang, Magaca Magaca Shiinaha: Holdwin Certification: ce Warranty: 1 SANNAD Adeeg Ka Dib iibka La Bixiyay: Taageero farsamo fiidiyoow Qodobbada Iibinta Furaha: Si fudud loo hawlgalo Adeegga Dammaanadda Kadib: Taageerada khadka tooska ah Warshadaha Lagu Haboon: Dukaamada Waxyaabaha Dhismaha, Dukaamada Dayactirka Mashiinka, Dhismaha wuxuu ka shaqeeyaa Adeegga Goobta Goobta: Ma jiro Meel Bandhig ah: Ma Jiro Awood Bixin ...
HOLDWIN Nooca Furan ee dheriga ciidda dheriga nin mashiinka qarxa ciidda qaab dhismeedka birta
Guudmarka Faahfaahin Faahfaahin Degdeg ah Xaaladda: Meel Cusub oo Asal ah: Zhejiang, Magaca Magaca Shiinaha: HOLDWIN Warshadaha Khuseeya: Warshadda Waxsoosaarka, Dukaammada Daabacaadda Cadaadiska: 4-8bar isticmaalka hawada: 3.2m3 / min 22kw 30HP Ballaca Taangiga (mm): 600 Qiyaasta Haanta (L ): 300 Nambarka Qoriga / biiyaha Ballaca (mm): 1/8 ama 10 ama 12 tuubbo qarxa: 18.5m dherer 32mm tuubbo qarxa Ballaca: 32mm abrasive xamuul: Grit 500-600kgs Xaaqid: birta birta ah, toogashada birta (0.1-1.2 mm ...
HOLDWIN Nylon Sandblasting tubbada isku xidhka ee Sandblast dheriga tuubada tubbada isku xira tubbada isku xira qaybaha sandblaster
Guudmarka Faahfaahinta Degdega ah Goobta Asalka: Zhejiang, Magaca Magaca Shiinaha: Holdwin Nooca: Qaybaha Qaybta Waxyaabaha: Aluminium Warshadaha Lagu Haboon: Dukaamada Waxyaabaha Dhismaha, Dukaamada Dayactirka Mashiinka ayaa ku habboon tuubbada: 1 `` 1 1/4 ''
HOLDWIN Koofiyad ciid qarxinaysa
Suufka xumbada jilicsan ee khafiifka ahi wuxuu hubiyaa koofiyaddu had iyo jeer si raaxo leh ugu fadhiiso madaxa
Suufku waa jillaab iyo loop korkiisa ayaa si fudud loogu soo saaray nadiifinta nadaafadda
Duubka weyn ee ku wareegsan muraayadaha laba-geesoodka ah ayaa u oggolaanaya aragtida ugu fiican iyada oo aan wax xanaaq lahayn
Xabad biiyaha qarxisa / biiyaha ciida / biiyaha carbide Tungsten
1. Hantida waxqabadka wanaagsan ee u adkaysiga abrasive, iska caabin ah daxalka, waxqabadka hantida deggan iyo nolol dheer.
2. Qalabka nozzels-ka loo habeeyay ayaa la heli karaa iyadoo loo eegayo sawirkaaga iyo arjigaaga.
3. Boron carbide iyo noungles tungsten carbide dhammaantood waa la aqbali karaa.
Qalabka tuubada ciida lagu nadiifiyo 1 “1 1/4” Qaybaha Mashiinka Sandblaster-ka
Tuubbo: duugista dabeecadda u adkaysta dabeecadda dabiiciga ah
Xoojinta: waxaa qoray Nylon cord ply
Daboolka: xoqid madow iyo caag antistatic ah.
Codsiyada: nadiifinta warshadaha, goynta, nadiifinta, shubista adeegyada adeega.
Heerkulka: -40 ° C + 80 ° C
Xirxirida:trans Filimka PVC
Gacmo gashi Sandblast ayaa toogtay mashiinka qarxa
Guudmarka Faahfaahinta Faahfaahinta Xaaladda: Meel Cusub oo Asal ah: Magaca Magaca Shiinaha: Holdwin Warshado Lagu Dabakhi karo: Dukaammada Waxyaabaha Dhismaha, Dukaamada Dayactirka Mashiinka, Dhismaha wuxuu u shaqeeyaa dhexroor fidsan: 30 cm culeys: 750-800g dherer: 68cm Adeegga gadaal-gadaal la Bixiyo: Kadib adeegga iibka Kartida Alaabada Bixinta Kaydinta: 1000 Lammaane / Lammaanayaal Bil kasta Baako & Gudbinta Faahfaahin Faahfaahin 20pairs / kartoon Port Ningbo Sandblast galoofyada toogtay mac ...
Qaybaha mashiinka sandblasting Neefsashada raaxo-u-adkaysiga Qalabka Mashiinka Mashiinka
1.Premium Waxyaabaha: Qeybta calaacalaha waa naqshad iyo naqshad aan siibasho lahayn. Waaxda maqaarka ee dhumuc weyn leh ayaa ah
xidho u adkaysta iyo ilmada u adkaysta. Qaybta gacmo-gashi waxay u isticmaashaa shiraac waara oo loogu talagalay daboolida iyo neefsashada.
2.Bhasho: Dharka cusub ee weelka, neefsashada ayaa marar badan ka badan kuwa maryaha caadiga ah
marada ayaa ka sii dhumuc weyn, taas oo ka dhigaysa qalliinka ciida ciideeda mid nabdoon.
3.Lightweight iyo Debecsan: maqaar galoofyada maqaarka galoofis gacmo gashi asalka ah;
Mashiinka sandblasting ee casriyaysan ee la casriyeeyay; ku habboon dhammaan moodooyinka, qafiifka ah oo jilicsan, qaro weyn oo xiran.
4.Product Size: Qiyaastii 24.4in dheer, dhexroor gacmeed 12.6in ballaaran, culeys 240g, dabacsanaan iyo hawlgal amaan ah.
5.Wide Codsi: Waxaa lagu dabaqi karaa dhammaan noocyada, qalabka asalka ah.
Gacmo gashi galoofisyada galoofyada caagga ah galoofyada warshadaha 60cm
Gacmo gashi Sandblast ah
Gacmo gashiyada ilaalinta shaqada gacmo gashi PVC Sandblast 60cm Midab: cagaar,
alaabta alaabada madow Dhererka alaabada PVC, 60 cm,
ilaalinta deegaanka ee xasaasiga ah, dahaadhka isku xidhka,
marka isticmaalku dhuuqi karo dhididka, oo aan xasaasiyad u lahayn maqaarka;
Qaybaha timirta oo dhumuc ahaan laba jeer gebi ahaanba cufan, calaacal walxaha laakiin sidoo kale ilaaliya calaacasha gacantaada, si aad qaybo ugu laashado.
Holdwin Mini sandblasting golaha wasiirada Mashiinka sandblastga la qaadan karo yar yar oo loo yaqaan 'sandblaster' oo ku haboon sandblaster
Waxaa jiri kara kala duwanaansho 0 ilaa 3cm sababo la xiriira cabirka munual. Fadlan la fahmo ka hor intaadan iibsan, mahadsanid.
Kabadhkan sandblaster-ka ayaa yar oo aan lahayn habaas aruuriya
1. Waxay ku habboon tahay garaash yar, guri iyo ganacsi.
2. Si aad ugu isticmaasho kuulaha quraaradaha, ciidda silica, alumta oksaydhka iyo waxyaabo kale oo badan.
3. Golaha birta ee birta dhammeeya waxay leeyihiin albaab balaastiig ah oo hufan, waxay kaa caawineysaa inuu ahaado mid xoqan oo qalalan.
4. shelf shelf laga saari karaa qaybo ka mid ah dareeraha inta lagu jiro kormeerka iyo qalajinta
1. Ku habboon garaashka yar, guriga iyo ganacsiga.
5. Bixinta kombaresarada hawada ee 40-80PSI @ 5CFM
HOLDWIN Balaastik Madoow oo O ah oo loogu talagalay qaybaha mashiinka sandblastka qashin-qubka
Sharootada galoofyada madow ee balaastigga ah waxaa loo isticmaali doonaa kabadhka Sandblaster.
Haddii aad dhiseysid gole wasiirro kuu gaar ah, ama aad cusbooneysiineyso, xirmadan waa waajib!
Giraantan ku xoq wejiga hore ee golahaaga, oo ku dheji gacmo gashi.Marka la rakibo, si sahal ah ayuu gacmo gashi ugu hayaa meesha.
Giraanta O ee giraangiraha sandblast
Xirmo: 2 kumbiyuutarro O faashad giraan giraan ah